"Waxaan xanuunka la qaybsanayaa ehelka Sir David oo ay tacsi u taallo iyo..". Qormo C/raxman C/shakur - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xildhibaan Sir David Amess ayaa la sheegay in uu dilay Cali Xarbi oo British ah, laakiin asalkiisu Soomaali ka soo jeedo. Waxaa la sheegay Cali in uu ahaa dhakhtar, weliba takhasus samaynayey.
Xildhibaan David oo muddo 40 sano ah ka tirsanaa Baarlamaanka Ingiriiska ayaa ku guda jiray (Constituency Surgery) oo ah maalmaha uu xildhibaanku fariisto xarun dadwayne ama dowladeed oo uu ku qaabilo dadka soo doortay ee qaba tabashooyin la xariira arrimaha socdaalka, qoysaska la is-haleeshiyo, sharciga soo daaha, deegaanka, caafimaadka, IWM.
Xildhibaannada Ingiriiska lama ilaaliyo, waardiye gaar ahna ma laha. Qof kasta ayaa imaan kara halka uu qabanayo Constituency surgery. Cali waa wiil ay waalidkiis in badan ay ku daddaaleen waxbarashadiisa ilaa uu noqday dhakhtar, waliba takhasus samaynaya, balse afkaartiisa xagga diinta ah ay xagjir noqotay.
Waaliddiinta Soomaaliyeed waxay aad ugu dadaalaan in ay ubadkooda ka ilaaliyaan in uu saaqido oo uu ku faraq xirto kooxaha abaabulan ee ku lugyeesha dilka, daroogada iyo dhaca. Si ay taas ugu suuragasho ayey dugsiga quraanka iyo masaajidka kula dadaalaan ubadkooda. Halkaas qudheeda waxaa fadhiya kuwa kale oo u duufsada dhinaca xagjirnimada iyo ku biirista kooxaha argagexisada.
Waalidku inta badan ubadkooda kalama sheekaystaan, kalama doodaan afkaartooda diineed, haddii ay ubaadkooda ku arkaan afkaar xagjir ah uma sheegaan Booliska qaabbilsan, taasina waxay keentaa in ay si sahal ah gacanta ugu galaan kooxaha xagjirka.
Dilka wiilkaas uu geystay wuxuu indhaha dadka British ka ah ku soo jeedinayaa guud ahaan Muslimka, gaar ahaan Soomaalida. Soomaali badan ayaa dhibbane u noqon doona. Waxaana kow ka ah waalidkiisa, walaalihiis iyo ehelkiisa.
Kooxaha cunsiriyiinta ah ayaa beegsan doona Soomaalida oo ah dad si sahlan loo bar garan karo xaga muuqa iyo labbiska, gaar ahaan dumarka. Dowladda Ingiriiska oo doonaysay in laabto boggii argagexiso la dirirka, una weeciso awooddii, dadaalkii iyo dhaqaalihii ku bixi jiray, mudnaan kale, ayaa arrinkani dood badan ku abuuri doonaa. Waxay kaloo dood ka dhalan doontaa amniga Xildhibaannada.
Waxaase intaas oo dhan ka sii daran in ay adkaaneyso is araggii sahlanaa iyo adeeggii tooska ahaa ee ka dhaxeeyey xildhibaanka iyo dadka soo doorta, taasoo dhaawici doonta hannaanka metelaadda iyo hal abuurkii dimoqoraadiyadda ee hormuudka u ahayd Britain.
Falka argagexiso ee uu wiilkaas gaystay wax badan ayey saamayn taban ku yeelanaysaa, laakiin waxaa hubaal ah in aysan jirin wax uu naftiisa, ehelkiisa, dadkiisa iyo diintiisa u terayo. Waxaan xanuunka la qaybsanayaa ehelka Sir David oo ay tacsi u taalo. Sidoo kale waalidka iyo qoyska Cali oo tiiraanyo iyo murug wayn ay maanta haysato.
W/Q: C/raxman C/shakuur Warsame
Siyaasi iyo Musharax Madaxweyne